Global Voices teny Malagasy » Tantaran’ny mpinamana mamahana sakafo maraina mpianatra zazavavy 500 isan’andro ao Yemen mba hahafahan’ireo mianatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Janoary 2019 16:19 GMT 1	 · Mpanoratra Elisa Marvena Nandika (en) i Kristina Edinger, Naomy
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Andrefana, Espaina, Yemen, Ady & Fifandirana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Mpianatra misakafo maraina ao an-tsekoly. Saripikan'i Faten ho an'i Solidarios sin Fronteras. Nahazoana alalana.
Noho ny tsy fahampian'ny fitaovana  nateraky ny ady ao Yemen, mihamitombo ny isan'ny fianakaviana voatery manajanona ny zanany tsy ho alefa any an-tsekoly. Matetika ny zazavavy no alefa manambady  na dia mbola tanora 13 taona aza. Na izany aza, nahita endrika fanavotana kely fa mahomby ny sekoly iray ao Sana'a renivohitra.
Nanomboka nanome sakafo maraina ho an'ny mpianatra zazavavy, anelanelan'ny enina ka hatramin'ny 16 taona, ao amin'ity sekoly ity ny FTMF Solidarios sin Fronteras  (miorina ao Espaina sy Yemen) izay saika ampandehanin'ny mpanolotena manontolo ary vatsian'ny tolotra ataon'ny tsirairay  — ny sasany kely dia kely tokoa fa misy iray euro isam-bolana—. Talohan'ny tetikasa dia tsy tonga nianatra ny ampahadimin'izy ireo. Niverina tsikelikely ny mpianatra ary hatramin'ny septambra 2018, tonga isan'andro any am-pianarana avokoa ny mpianatra miisa 525 ao aminy, hoy ny mpanorina ny Solidarios.
Nifampiresaka tamin'ny roa tamin'ny mpanorina ny FTMF tamin'ny alalan'ny Whatsapp aho, dia i Eva, izay efa nihaona tamiko mivantana taona vitsivitsy lasa izay tany Barcelona, sy i Faten, izay any Yemen. Niresaka tamiko ny fomba nahaterahan'ny tetikasa “Sakafo maraina hanabeazana sy hiarovana”  ry zareo. Niangavy ahy ihany koa ry zareo tsy hampiseho manontolo ny anarany feno na ny anaran'ny sekoly noho ny antony ara-piarovana.
Tamin'ny marsa 2018, nanatona an'i Faten ny mpampianatra tao amin'ny sekoly hiresaka momba ny zazavavy iray 8 taona hita ho mihamahia ary mora sempotra isan'andro. Tampoka teo izy nitsahatra tsy nanatrika sekoly intsony. Tsy izy no voalohany nandao, fa izy no zandriny indrindra. Niresaka tamin'ny fianakaviana ny mpampianatra: tena mila vola indrindra ry zareo ary nahazo tolotra hampanambady ny zananivavy.
Rehefa nifampiresaka tamin'i Faten ilay mpampianatra dia nanontany tena raha mety hampandrisika ny fianakaviana handefa ny zanany any an-tsekoly ny fanomezana sakafo azy isan'andro. Ary dia teraka ny hevitra. Nilaza i Faten :
Zanakavavin'ny mpiasan'ny ozinina fanaovan-damba izay potika tanteraka [nandritra ny fandarohana baomba] ny ankamaroan'ireo zazavavy ireo. Telo taona izay no tsy nahazo karama ny fianakaviana. Ahoana moa no ataon-dry zareo hanentsenana ny fandaniana ara-tsakafo? […] Ny zava-dehibe indrindra dia ny anohananay azy ireo mba hahafeno ny fitaizana. Faly ihany koa ny fianakaviany, satria mampisoroka azy ireo amin'ny fijanonana ao an-trano na voatery manambady azy ireo amin'izao taonany izao ny fampandehanana azy ireo any an-tsekoly.
Tamin'ny Marsa 2018, nambaran'ny Firenena Mikambana ho iharan'ny krizy mahaolona ratsy indrindra eto ambonin'ny tany  ny ao Yemen. Satria miakatra avo dia avo ny tsi-fisian'asa sy ny fiakarambidim-piainana, 80 isanjaton'ny fianakaviana ao amin'ny firenena no mitrosa ary 65 isanjato no mitrongy vao homana .
Vakio ihany koa: Ny ady sy ny fitantanana ratsy ary ny fiovaovan'ny toetr'andro ao Yemen no mahatonga ny tsy fahampian-drano  [mg]
Nanatona dokoteran'ankizy ny Solidarios sin Fronteras mba hilaza sakafo mety atao maraina. Miantsena isa-maraina eny amin'ny mpivarotra i Faten ary misy mpivady mampiasa ny lakozian'i Faten hikarakarana, hamonosana ary itondrana ny sakafo. Mandritra ny fakan-drivotra ao am-piasana maharitra 45 minitra izy no mihazakazaka mankany an-tsekoly manampy ny mpampianatra hizara ny sakafo. Indraindray manampy azy ihany koa ny mpiray tampo aminy.
Marina ihany koa ity fomba fihevitry ny ataovinao-ihany ity amin'ny programa telo karakarain'ny fikambanana. Amin'ny “Fanampiana ara-tsakafo ho an'ny fianakaviana ,” ry zareo mizara fonosan'entana ho an'ny fianakaviana marefo ao an-tanànan'i Sanaa, Aden, Amran, Raydah, Hodeidah, Al Dorihimi ary ireo fianakaviana nafindra toerana ao Taiz. “Rano ho an'i Yemen ” mikarakara ny fitehirizan-drano ao amin'ny tobin'ny olona nafindra toerana anatiny ao Amran sy Raydah ary ny “Manorina indray an'i Socotra ” manolotra simenitra hananganan-trano sy ihadiana fatsakana ao amin'ny nosy Socotra noravain'ny rivodoza tamin'ny taona 2015.
“Ahoana raha isika ihany no manao izao?”
Sakafo maraina efa vita karakara zaraina isa-maraina ao an-tsekoly. Sary avy amin'i Faten ho an'ny Solidarios sin Fronteras (Firaisankina tsy voasakan-tsisintany). Nahazoana alalana.
Dia iray nataon'i Eva nankany Yemen tamin'ny taona 2012 no nihaonany tamin'i Faten. Nijery lanonan-tsingerintaona teo amin'ny latabatra anilany tao amin'ny fisotroana kafe iray tao Sana'a i Eva ary nanolotra mofomamy ho azy ilay zazavavy mankalaza tsingerintaona. Faten io zazavavy io. Lasa mpinamana ry zareo ary lasa nihaona imbetsaka taorian'izany, tamin'ny taona 2015 no haingana indrindra, dia nataon'i Eva farany nankany Sana'a. Nahatsiaro i Faten:
Volana vitsy taorian'ny nanombohan'ny ady, tao amin'ny WhatsApp (tahaka ny mahazatra) aho tamin'izay fotoana izay ary nanontany an'i Eva, “Afa-manao zavatra ve isika hanampiana?”. Namaly izy fa hijery fikambanam-pifandaminana ao Espaina hiaraka amin'ny namany Noè, ary nitady iray hafa aho teto Yemen.
Tsy nahita FTMF miasa ao Yemen azony itokisana i Eva, izay manana fahazaran-draharaha 15 taona eo amin'ny sehatrny ny fampandrosoana iraisampirenena. Ka dia nanapa-kevitra izy sy Faten, miaraka amin'ny namana fahatelo antsoina hoe Noèlia, hanangana iray hotantanin'izy ireo tamin'io taona io.
Ekipa volontera sady boto no mpanaramaso izy telo mirahavavy ireto ary manantena ny fanohanan'ireo volontera azo itokisana hafa eo amin'ny firenena roa tonta. Eva sy Noèlia, izay samy monina ao Espaina no miandraikitra ny fanohanana ara-bola ataon'ny hafa: miankina amin'ny media sosialy , ny radio , ny fampitam-baovao an-tsoratra printy  ary ireo famakianteny (fampianarana ambony)  ry zareo amin'ny fampielezana ny teny momba ny asan-dry zareo sy hanintonana ny mpandray anjara. Manolo-bola an-tserasera ny ankamaroan'ny olona ary manampy ny tetikasa tsirairay ao anatin'nyfanavahana azy ireo. Faten no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny bemidina eny an-kianja — izay matetika miainga avy ao an-tranony ihany. Izy telo mirahavavy no mandrafitra ny ekipam-pitantanana fototra ary mifampitady hatramin'ny amin'ny fotoana hanatontosana ny raharahany ao amin'ny FTMF mifanila amin'ny asa aman-draharaha ataony isan'andro.
Mizara ara-potoana ny saripika , lahatsary , ary ny fanavaozam-baovao amin'ny antsipirihany  ry zareo ao amin'ny pejy media sosialy isaky ny tetikasa tsirairay tanterahin-dry zareo. Mampiely votoaty ihany koa ry zareo hanaovana fanairana momba ny ady ao Yemen, indrindra fa ny anjara toeran'i Espaina  asy ireo firenen-kafa amin'ny fampitaovana ara-piadiana  ampiasaina mandritra ny ady.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/04/132437/
 Noho ny tsy fahampian'ny fitaovana: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-s-humanitarian-crisis-persists-despite-humanitarian-funding
 tolotra ataon'ny tsirairay: https://www.teaming.net/solidariossinfronteras-desayunosparaeducaryprotegerenyemen-?lang=es_ES
 “Sakafo maraina hanabeazana sy hiarovana”: http://www.solidariosinfronteras.org/educacion/
 ratsy indrindra eto ambonin'ny tany: https://news.un.org/en/focus/yemen
 mitrongy vao homana: http://files.unicef.org/yemen/Yemen2Years-children_falling_through_the_cracks.pdf
 Ny ady sy ny fitantanana ratsy ary ny fiovaovan'ny toetr'andro ao Yemen no mahatonga ny tsy fahampian-drano: https://mg.globalvoices.org/2018/10/15/127153/
 Fanampiana ara-tsakafo ho an'ny fianakaviana: https://www.migranodearena.org/en/cause/16425/emergencia-humanitaria-en-yemen-ayuda-urgente-a-familias-5-campaa
 Rano ho an'i Yemen: https://www.teaming.net/ssf-aguayemen?lang=en_UK
 Manorina indray an'i Socotra: https://solidariosinfronteras.org/reconstruir-socotra/
 fampitam-baovao an-tsoratra printy: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20160614/eva-erill-un-like-no-da-agua-a-un-nino-refugiado-un-euro-si-5206002
 famakianteny (fampianarana ambony): https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=U7nCteNWQXY
 ny fanavaozam-baovao amin'ny antsipirihany: https://twitter.com/solidariosSF
 fampitaovana ara-piadiana: https://edition.cnn.com/2018/11/22/middleeast/arms-exports-saudi-arabia-intl/index.html